क्रिसमस शब्दको उत्पत्ति – विश्वासको आवाज
अचेल चलाइने ‘क्रिसमस’ शब्दलाई ई.सं. १०३८मा ‘क्रिस्टेस म्यास्से’ (Cristes Maesse) को रूपमा चलाइएको पाइन्छ, यसले ‘प्रभुभोज’ मानेको अर्थ दिँदथ्यो। ई.सं ११३१मा आएर यसले ‘क्रिस्टेस–मेस्से’ (Cristes-messe) को रूप लियो।/1/ याद गर्नुस्, यी दुवै अङ्ग्रेजी शब्दहरू हुन्। यसैबाट अपभ्रंश भएर ‘क्रिसमस’ बनेको हो। यसलाई नेपालीहरूले जस्ताको तस्तै सापटी लिएको भए पनि बोलाइ र लेखाइमा ‘क्रिसमस/ख्रीष्टमस’ चलाइन्छ।
‘क्रिसमस‘ शब्द जन्मनुमा हिब्रू, ग्रीक र ल्याटिन भाषाले प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ।
यो ग्रीक र ल्याटिनको सङ्गम हो
क्राइस्ट र मास दुई अलग शब्दहरू हुन्। ग्रीक शब्द ‘क्रिस्टस’ (Christos) बाट क्रिस्टेस भयो र यसमा म्यास्से maesse शब्द जोडियो। वास्तवमा म्यास्सेको ल्याटिन मूल शब्द missa हो र यसैबाटै the holy mass, अर्थात् प्रभुभोज बनेको बुझिन्छ। बाह्रौ शताब्दीसम्म Christ’s Mass शब्दलाई क्याथोलिकहरूको मण्डलीमा ख्रीष्टको जन्म नभएर प्रभुभोजको सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्थ्यो।
‘म्यास्से’ maesse शब्द हिब्रू ‘मासेह’को अपभ्रंश रूप हो जसको अर्थ ‘उद्धारकर्ता/अभिषिक्त जन’ हो। ग्रीक ‘क्रिस्टस’ले दिने अर्थ पनि ‘उद्धारकर्ता/अभिषिक्त जन’ नै हो। यहाँ कुरो स्पष्टै छ कि ग्रीक क्रिस्टस र हिब्रू मासेहको सङ्गमबाट अहिले हामीले चलाउने क्रिसमस शब्दको गठन भएको बलियो सम्भावना छ।
इतिहासको कालखण्डमा अचेल चलाइने क्रिसमस शब्दलाई विभिन्न हिज्जेमा यसलाई लेख्ने गरिन्थे, यहाँ हेर्नुस् त!
निष्कर्ष क्रिसमस शब्द प्राचीन मण्डलीहरूले कर्मकाण्ड सञ्चालन गर्ने क्रममा विकास गरेका हुन्। यो शब्द बाइबलमा नभए पनि यो बिलकुलै बाइबलीय छ। येशूको जन्म बारे पूरै वृत्तान्त बताउनको लागि क्रिसमस जतिको मीठो र सटिक शब्द हामीसँग छैन। यो शब्दको जन्म दिने ख्रीष्टियान साहित्यकारहरू तारिफ गर्न लायकका छन्। ‘क्रिसमस’ शब्दमा ‘क्राइस्ट’ अर्थात् ख्रीष्टको नामले प्रमुख स्थान ओगटेको छ, जसमा हिब्रू शब्द ‘मास’ले येशू उद्धारकर्ता हुनुभएको दाबी गर्दछ। तसर्थ, क्रिसमस गैर–बाइबलीय होइन। यो शब्द बाइबलमा छैन भन्दै निहूँ खोज्ने काम कसैबाट हुन्छ भने मण्डली इतिहासलाई अध्ययन गर्नु राम्रो हुन्छ।
 Joyzy Pius Egunjobi, Be Blessed 3: Questions on Christian Liturgical Time & Seasons (np: Lulu Press, 2017), 18.
the Origin of the Term Christmas